Iyo itsva OPPOWatch inogadziriswawo paApple Watch | Ndinobva mac
Iyo itsva OPPOWatch inogadziriswawo paApple Watch
Iyo dhizaini, tambo, kunyangwe iwo maratidziro ari mumufananidzo wehurukuro yacho anotiyeuchidza nezveApple Watch. Isu tinonzwisisa kuti iyi mhando yewatch ine dhizaini yakafanana neApple Watch, asi mune ino kesi korona yedhijitari chete ndiyo isipo ...
Iyo itsva OPPOWatch Ichasvika zviri pamutemo munaKurume 6, Chishanu chinotevera uye dhizaini yayo mukushayikwa kwekuona zvimwe zvese zvirevo zvatinogona kuti ikopi yeApple wachi. Hatinzwisise chaizvo kuti nei vagadziri vasingatarise dzimwe nzira dzakasiyana mumawachi avo akangwara sezvinoita Samsung, semuenzaniso, kutevedzera dhizaini kunogona kushandira vamwe vashandisi asi kwete vese.
Uye isu tinofungidzira kuti kuchave nevanhu vasingafarire dhizaini yeApple Watch, uye kwese kwaunotarisa, mawatch anotangwa pamusika ndiwo "chaiwo" makopi eApple Watch. Mune ino kesi mabhatani maviri padivi ndiwo chete musiyano pakati payo uye Cupertino kambani wachi. Isu tinosiya iyo tweet yavakaburitsa kubva kuOPPO kunyevera nezve yavo mharidzo:
Yasvika nguva yekukwazisa #OPPOWatch. 👀
Yakaburitswa pa # OPPOFindX2 Kutanga Chiitiko Kurume 6, 10.30am CET. ⏰ pic.twitter.com/IwbOJnHoyg
- OPPO (@oppo) March 2, 2020
Vamwe vashandisi vasingade Apple zvigadzirwa vanokumbira kuti vachinje kune notch yeiyo iPhone, mumafuremu eMac kana zvakafanana kuitira kuti vamwe vagadziri vateedzere iyo dhizaini uye nenzira iyi havafanirwe kutakura chigadzirwa chinonyatsoita. kwete Ivo vanozvifarira nekuti zvinoita kunge Apple. Muchidimbu, nekuda kwekunakirwa kwemavara, izvo zviri pachena ndizvozvo Iyi OPPOWatch imwe kopi yeiyo Apple wachi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Iyo itsva OPPOWatch inogadziriswawo paApple Watch
Nhau dzakanaka dzeApple nekuwedzera kugadzirwa kuFoxconn
Apple inoburitsa yechina beta ye macOS 10.15.4 uye tvOS 13.4